Mamnuucida Vape Jumlada Mareykanka iyo Hareeraha Wershada iyo soo saarayaasha | SIGAAR
Mamnuucida Vape ee Maraykanka iyo Dunida oo dhan
Aragtida rasmiga ah ee qiiqa iyo isticmaalka nikotiinka guud ahaan wey kala duwan yihiin. Boqortooyada Ingiriiska gudaheeda, kuuskuusku waxaa aasaas ahaan dhiirigaliya hay'adaha caafimaadka ee dowladda. Sababtoo ah sigaar cabista ayaa culeys qaali ah ku ah Adeegga Caafimaadka Qaranka ee Boqortooyada Ingiriiska, waddanku wuxuu u taagan yahay inuu lacag badbaadiyo haddii kuwa cabaya ay sigaar elektaroonig ah u beddelaan.
Wadamada kale badankood sidoo kale waxay oggol yihiin suuq uumis habeysan oo nidaamsan, laakiin kuma qanacsana inay oggolaadaan dhaqanka. Mareykanka gudahiisa, FDA waxay awood u leedahay alaabada uumiga, laakiin waxay sideedii sano ee ugu dambeysay iskudayeen inay abuuraan nidaam sharciyeyn shaqeynaya. Kanada waxay xoogaa raacday qaabkii Ingiriiska, laakiin sida Ameerika ka jirta, gobolladeedu waxay xor u yihiin inay samaystaan ​​xeerar u gaar ah oo mararka qaar khilaafsan yoolalka dowladda federaalka.
Waxaa jira in ka badan 40 waddan oo leh nooc ka mid ah mamnuucista tuubbada - adeegsiga, iibinta ama soo dejinta, ama isku dar. Qaarkood waxay leeyihiin mamnuucyo dhammaystiran oo ka dhigaya uumiga mid sharci-darro ah, oo ay ku jiraan mamnuucidda iibka iyo haysashada labadaba. Mamnuuciddu waxay ku badan tahay Aasiya, Bariga Dhexe, iyo Koonfurta Ameerika, in kasta oo mamnuucista nikotiinka ugu caansan ay leedahay Australia. Wadamada qaar ayaa wareersan. Tusaale ahaan, kuus kuuskuusashada Japan waa sharci waxsoosaarkana waa la iibiyaa, marka laga reebo e-dareere nikotiin leh, oo sharci darro ah. Laakiin waxyaabaha tubaakada ee aan kuleylka ku gubin sida IQOS waa kuwo gebi ahaanba sharci ah oo si ballaaran loo isticmaalo.
Way adag tahay in lala socdo dhammaan isbeddelada sharciyada uumiga. Waxa aan halkaan isku daynay waa soo noqnoqoshada wadamada cunaqabateynta ama xaddidaadaha daran ku haya uumiga ama alaabada uumiga. Waxaa jira sharaxaad kooban. Tan looma jeedin hage safar ama talooyin ku saabsan uumiga iyo duulista. Haddii aad booqanayso dal aadan aqoon waa inaad ka hubisaa ilo-wareed casri ah oo lagu kalsoonaan karo sida safaaradda waddankaaga, ama xafiiska safarka ee waddanka aad booqanayso.
Maxay dalalku u mamnuucaan uumiga?
Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) iyo tubaakada xakamaynta tubaakada waxay gacanta ku hayaan Heshiiska Qaab-dhismeedka Tubaakada (FCTC) - heshiis caalami ah oo ay saxiixeen in ka badan 180 waddan - ayaa dhiirrigeliyey xannibaadaha iyo mamnuucidda sigaarka elektaroonigga ah tan iyo markii badeecadihii ugu horreeyey ay bilaabeen inay yimaadaan Yurub iyo Xeebaha Mareykanka 2007. WHO waa saameyn xoog leh (oo inta badan ugu awoodda badan) saameyn ku leh siyaasadaha caafimaadka iyo sigaar cabista dalal badan - gaar ahaan waddamada saboolka ah, halkaas oo WHO ay maalgeliso barnaamijyo ay ka shaqeeyaan dad badan oo xirfadlayaal caafimaad ah.
FCTC lafteeda waxaa haga lataliyayaal ka socda hay'adaha gaarka loo leeyahay ee ka hortagga sigaar cabista ee Mareykanka sida Ololaha Carruurta Tubaakada-Bilaashka ka ah - in kasta oo Mareykanku uusan qeyb ka ahayn heshiiska. Sababtoo ah kooxahani waxay la dagaallameen ilkaha iyo cidiyaha ka hortagga uumiga iyo waxyaabaha kale ee yareynta waxyeelada tubaakada, boosaskooda waxaa qabtay FCTC, iyadoo natiijooyin ba'an ay u qabaan dadka sigaarka caba dalal badan. FCTC waxay kula talisay xubnaheeda (waddamada badankood) inay mamnuucaan ama si adag u xakameeyaan sigaarka elektarooniga ah, in kasta oo dukumiintiga aasaasiga ah ee heshiiska lagu qorayo yareynta waxyeelada oo ah istiraatiijiyad suuragal ah oo lagu xakameeyo tubaakada.
Wadamada badankood waxay ku tiirsan yihiin iibinta tubaakada, iyo gaar ahaan iibinta sigaarka, dakhliga canshuuraha. Xaaladaha qaarkood, saraakiisha dawladdu waxay daacad ka yihiin xulashadooda inay mamnuucaan ama xaddidaan alaabada qulqulaya si loo ilaaliyo dakhliga tubaakada. Had iyo jeer dawladuhu waxay doortaan inay ku daraan uumiga qaanuunka waxsoosaarka tubaakada, taas oo ka dhigaysa mid fudud in lagu soo rogo canshuuraha ciqaabta macaamiisha. Tusaale ahaan, markii Indooniisiya ay ku soo rogtay 57 boqolkiiba canshuurta sigaarka elektaroonigga ah, sarkaal ka tirsan wasaaradda maaliyadda ayaa sharraxay in ujeeddada laga qaadayo canshuurtu ay tahay "in la xaddido cunista tafaariiqda."
Tuujinta dadweynaha ee waddammada badankood waa la xaddiday sida sigaar cabista, aad ugu eg Maraykanka. Haddii aad la yaaban tahay haddii aad ku faani karto dadweynaha, waxaad caadi ahaan arki kartaa boodh kale ama qiijiye oo weydii (ama tilmaam) waxa sharciyadu yihiin. Markaad shaki ku jirto, kaliya ha sameyn. Meeshii fawaaxishku ay sharci darro tahay, waxaad si fiican u hubsan lahayd inaan sharciyada la dhaqangelin doonin ka hor intaadan bilaabin faanista.
Xagee alaabada uumiga laga mamnuucay ama laga xadiday?
Liiskayagu wuu ballaadhan yahay, laakiin malaha wax qeexan. Shuruucdu si isdaba joog ah ayey isu beddelaan, in kasta oo xiriirka u dhexeeya hay'adaha u ololeeya uu soo wanaagsanaanayo, haddana weli ma jiro meel dhexe oo lagu keydiyo macluumaadka khuseeya sharciyada uumiga adduunka oo dhan.Liiskayagu wuxuu ka yimid ilo isku dhafan: Xaaladda Caalamiga ah ee Takobaatada Dhibaatada Tubaakada ee ka socota hay'adda u doodista dhimista waxyeellada Ingiriiska ee Aqoonta-Waxqabadka-Isbeddelka, Ololaha loogu talagalay Websaydhada Xeerarka Tubaakada ee Tubaakada-Bilaashka ah ee Carruurta, iyo barta Caalamiga ah ee Tubaakada Tubaakada oo uu abuuray Johns Baarayaasha Jaamacadda Hopkins. Xaaladda countrie qaarkoods waxaa go'aamiyay cilmi baaris asal ah.
Qaar ka mid ah dalalkan waxay leeyihiin ganaaxyo toos ah oo ku saabsan isticmaalka iyo iibka, badankood waa mamnuuc iibinta, qaarna waxay mamnuucaan oo keliya waxyaabaha nikotiinka ama nikotiinta ku jira. Wadamo badan, sharciyada waa la iska indhatiray. Kuwa kale, waa la dhaqan galiyaa. Mar labaad, ka hubi ilo la isku halleyn karo ka hor intaadan u safrin waddan kasta oo ay ku jiraan dareeraha qiiqa iyo e-dareere. Haddii waddan uusan liis gaarin, uumiga waa la ogol yahay oo waa la nidaamin karaa, ama ma jiro sharci gaar ah oo xukumaya sigaarka elektaroonigga ah (illaa iyo hadda).
Waan soo dhaweyneynaa wixii macluumaad cusub ah. Haddii aad ogtahay sharci isbeddelay, ama sharci cusub oo saameynaya liistadeena, fadlan ka faallo oo waan cusbooneysiin doonnaa liiska.
Sharci in la isticmaalo, sharci darro in la iibiyo
Sharci darro in la iibiyo, marka laga reebo waxyaabaha caafimaad ee la oggolaaday
Sharci in la isticmaalo, sharci darro in la soo dhoofiyo ama la iibiyo. Bishii Febraayo 2020, madaxweynaha Mexico wuxuu soo saaray amar mamnuucaya soo dejinta dhammaan badeecooyinka uumiga, oo ay ku jiraan alaabada nikotiin-nikotiinta. Si kastaba ha noqotee, weli waxaa jira bulsho sii kordheysa oo ku qulquleysa waddanka, iyo hoggaanka u-qareemida kooxda macaamiisha ee Pro-Vapeo Mexico. Weli lama oga in dowladdu ay isku dayi doonto inay la wareegto badeecooyinka ay dalka soo galaan dadka soo booqda
La rumeysan yahay inuu sharci darro yahay isticmaalka, sharci darro in lagu iibiyo nikotiinka
Sharci ah in la isticmaalo, sharci ahaan in la iibiyo-laakiin iibinta alaabada la soo saaray wixii ka dambeeyay Agoosto 8, 2016 waa mamnuuc iyadoon amar suuq geyn ah laga helin FDA. Ma jiro shirkad uumiga dalbatay amar suuq-geyn ah wali. Sebtember 9, 2020, badeecadaha ka horreeya 2016-ka ee aan loo soo gudbin oggolaanshaha suuq-geynta sidoo kale waxay noqon doonaan sharci-darro in la iibiyo
Sharci ahaan in la isticmaalo, waxaa la rumeysan yahay in si sharci darro ah loo iibiyo, marka laga reebo waxyaabaha caafimaad ee la oggolaaday
La rumeysan yahay in la adeegsan karo sharci, sharci darro in la iibiyo-laakiin xaaladdu lama hubo
La rumeysan yahay sharci darro in la isticmaalo, sharci darro in la iibiyo
Sharci ahaan in la isticmaalo, waxaa la rumeysan yahay in sharci darro lagu iibiyo
Sharci ahaan in la isticmaalo, sharci darro in la iibiyo - si kastaba ha noqotee, waddanku wuxuu ku dhawaaqay 2019 ujeedkiisa inuu sharciyeeyo oo uu xakameeyo sigaarka elektaroonigga ah
Bangladesh hadda ma laha sharciyo ama qawaaniin u gaar ah faasiqinta. Si kastaba ha noqotee, bishii Diseembar 2019 sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in dowladdu ay "si firfircoon uga shaqeyneyso in ay xayiraad saarto soo saarista, soo dejinta iyo iibinta sigaarka elektaroonigga ah iyo dhammaan waxyaabaha u nugul u-baabba'idda si looga hortago khataraha caafimaad.
Sharci ah in la isticmaalo, sharci darro in la iibiyo badeecadaha badankood
La mamnuucay: waa sharci darro in la isticmaalo, sharci darro in la iibiyo
La rumeysan yahay in la mamnuucay
Bishii Sebtember 2019, dawladda dhexe ee Hindiya ayaa gebi ahaanba mamnuucday iibinta alaabada uumiga. Dowladda, oo si fiican u ogsoon in 100 milyan oo Hindi ah ay sigaar cabaan iyo in tubaakada ay disho ku dhowaad milyan qof sanadkii, ayaan sameynin wax dhaqdhaqaaq ah si loo yareeyo helitaanka sigaarka. Si kadis ah maahan, dowladda Hindiya waxay leedahay 30 boqolkiiba shirkadda tubaakada ee ugu weyn dalka
Sharci ahaan in la isticmaalo, sharci ahaan in la iibiyo aaladaha, sharci darro in la iibiyo dareeraha ay nikotiintu ku jirto (in kasta oo shakhsiyaadku soo dhoofsan karaan alaabooyinka nikotiintu ku jirto oo leh xaddidaadyo qaarkood). Waxyaabaha tubaakada kulul (HTPS) sida IQOS waa sharci
Sharci ah in la isticmaalo, sharci darro in la iibiyo alaabada ay ku jirto nikotiintu. In kasta oo iibinta macaamiisha ee alaabada ay ku jirto nikotiintu ay sharci darro tahay, Malaysia waxay leedahay suuq uumi baxaya oo kobcaya. Maamulka ayaa mararka qaar weerara dukaamada tafaariiqda iyo alaabooyinka lala wareego. Iibinta dhammaan alaabooyinka qulqulaya (xitaa haddii uusan lahayn nikotiin) ayaa gebi ahaanba laga mamnuucay gobollada Johor, Kedah, Kelantan, Penang iyo Terengganu
Waxaa la rumeysan yahay in la mamnuucay, iyadoo lagu saleynayo maqaal Ogosto 2020
Sharci in la isticmaalo (laga mamnuucay dadweynaha), waa sharci darro in la iibiyo
La mamnuucay: waa sharci darro in la isticmaalo, sharci darro in la iibiyo. Laga soo bilaabo sanadkii hore, haysashadu sidoo kale waa dambi, lagu ciqaabi karo ganaax lacageed oo gaaraya $ 1,500 (US)
La rumaysan yahay inuu sharci yahay adeegsi, sharci darro in la iibiyo. Thailand waxay ku kasbatay sumcad dhaqangelinta mamnuucideeda soo dejinta iyo iibinta alaabada faleebada oo leh dhowr dhacdo oo heer sare ah sanadihii la soo dhaafay, oo ay ku jiraan xiritaanka dalxiisayaasha faaruqsan ee “soo dejinta”. Dowlada ayaa lagu soo waramayaa inay dib uga fiirsaneyso sharciyada adag ee Sigaarka Sigaarka
La rumaysan yahay inuu sharci yahay adeegsi, sharci darro in la iibiyo
Sharci in la isticmaalo, sharci darro in la soo dhoofiyo ama la iibiyo. Iibinta iyo soo dejinta badeecooyinka uumiga waa sharci darro gudaha Turkiga, markii uu dalku cadeeyay mamnuucitaankiisa sanadkii 2017, WHO waxay soo saartay warsaxaafadeed ay ku faraxsantahay go’aanka. Laakiin sharciyada waa is khilaafsan yihiin, waxaana jira suuq uumi baxayo iyo bulsho faquuq ku leh Turkiga
Sharci in la isticmaalo, sharci darro in lagu iibiyo nikotiinka. Australiya gudaheeda, lahaanshaha ama iibinta nikotiinka waa sharci daro adoon dhakhtar kuu qorin, laakiin hal wadan mooyee (Western Australia) qalabka uumiga waa sharci in la iibiyo. Sababtaas awgeed waxaa jira suuq uumi baxa ku koraya oo sharci ah in kastoo sharciga uu jiro. Ganaaxyada lahaanshaha ayaa ku kala duwan gobolba gobolka kale, laakiin waxay noqon kartaa mid aad u daran
Sharci ah in la isticmaalo, sharci darro in la iibiyo — in kasta oo dalku u muuqdo inuu qarka u saaran yahay nidaaminta alaabada uumiga
U taxaddar oo samee cilmi-baaris!
Mar labaad, haddii aad booqanayso dal aanad hubin, fadlan ka hubi ilaha waddankaas ku saabsan sharciyada iyo waxa ay u dulqaadan karaan mas'uuliyiinta. Haddii aad u socoto mid ka mid ah waddamada haysashada uumiga ay sharci-darro tahay - gaar ahaan waddamada Bariga Dhexe - ka fikir laba jeer sida aad uga go'an tahay inaad u faanto, maxaa yeelay waxaad la kulmi kartaa cawaaqib xumo. Dunida badankeedu waxay soo dhaweynayaan uumiga maalmahan, laakiin qorsheynta iyo cilmi baarista qaar ayaa ka ilaalin kara safarkaaga wacan inuu isu beddelo riyo cabsi leh.
E Xidhmada Sigaarka Bacaha, E Sigaarka Uumiga Liibiya, Sigaar Cabbida, Newport E Sigaar, Sigaar kuleylka, Epen,